အချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ဖခင်ကို ပွေ့ဖက်ခွင့်ရဖို့ အသနားခံတောင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးမလေးအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ ရဲအရာရှိများ - Mckzone Daily
အချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ဖခင်ကို ပွေ့ဖက်ခွင့်ရဖို့ အသနားခံတောင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးမလေးအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ ရဲအရာရှိများ
Flavio Ang Panday လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ကလေးမလေးက သူမရဲ့ဖခင်အား ပွေ့ဖက်ခွင့်ကို တောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်များဟာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အများအပြားရဲ့ နှလုံးသားကို ထိပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ Flavio က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်အကောင့်မှာ ၎င်းကလေးမလေးရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့တောင်းဆိုမှုလေးအကြောင်းကို မျှဝေပေးခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းက အချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ဖခင်ကို လာတွေ့တော့ ” ဆရာ သမီး အဖေ့ကို ခဏဖက်လို့ရမလား??? အဖေ့ကို အရမ်းလွမ်းနေလို့ပါ၊ အဖေ့ကို အခုပဲ လွှတ်ပေးလိုက်လို့မရဘူးလား ????? ” လို့ ကလေးမလေးက ရဲအရာရှိတဟ်ဦးကို တောင်းဆိုမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် သူမဟာ ရဲအရာရှိအား သူမရဲ့ဖခင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေခွင့်ပေးစေလိုကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲ့တာက မဖြစ်နိုင်သလို ၎င်းကို တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ရဲအရာရှိက ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ကလေးမလေးက အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရဲများ၏ ရှင်းပြချက်ကို နားလည်ပုံပေါက်ပေမဲ့လည်း ဖခင်ဖြစ်သူကို ပွေ့ဖက်ရန် တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သူမဟာ အလွန် ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။
ထို့နောက် ကလေးမလေးက သူမရဲ့ဖခင်ကို ပွေ့ဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာ ရဲအရာရှိများကို မျက်နှာပေါ်မှာ ရွှင်လန်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူအပြားအများက ကလေးမလေးအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့၎င်းရဲအရာရှိများကို ကျေးဇူးခဲ့ကြပြီး ၎င်းပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ Flavio ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့ပြင် လူအတော်တော်များများက ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ရဲတွေက တချို့သော ကျား၊ မတွေအတွက် ၎င်းတို့ပုံရိပ်က မကောင်းပေမယ့်လည်း ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ် တူညီတဲ့အမြင်ရှိသူများ များစွာရှိနေသေးကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့အချက်ကို သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
Be the first to comment on "အချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ဖခင်ကို ပွေ့ဖက်ခွင့်ရဖို့ အသနားခံတောင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးမလေးအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ ရဲအရာရှိများ"